भारतीय मिडिया जस्तो बकम्फुसे हैन, प्रमाणका आधारमा बोल्छौं भन्दै रविले दिए भारतीय मिडियाहरुलाई कडा जवाफ…हेर्नुहोस् । – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतीय मिडिया जस्तो बकम्फुसे हैन, प्रमाणका आधारमा बोल्छौं भन्दै रविले दिए भारतीय मिडियाहरुलाई कडा जवाफ…हेर्नुहोस् ।
भारतीय मिडिया जस्तो बकम्फुसे हैन, प्रमाणका आधारमा बोल्छौं भन्दै रविले दिए भारतीय मिडियाहरुलाई कडा जवाफ…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नेपाली नक्सा सा’र्वजनिक गरेसँगै भारतमा खैलाबैला म’च्चिएको छ। केही दिनअघि मात्र भारतले नेपाली भूमि’मा सडक नि’र्माण गरी उ’द्घाटन गरेपछि नेपालले त्यस’प्रति चासो देखाउँदै नयाँ भू’भाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने नि’र्णय गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै भारतीय मिडियाहरुमा नेपालको उक्त कार्य’प्रति वि’रोध जनाउँदै नेपाल चीनको गोटी भएको आरोपस:लगाए । लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी आफ्नो भू’मि भएको भन्दै नेपालको न’क्सा अ’स्वीकार्य रहेको भन्दै विभिन्न समाचार बुलेटिनहरु मा नेपालको वि’रोध गरे ।
यसैक्रममा नायिका मनिषा कोइरालालाई ट्वीटलाई लिएर भारतीय मिडियाले उनको आ’लोचना गरे । “भारतका खाना खाके , चीनका गना गाता है “भन्दै निम्न स्तरको शब्द प्रयोग गरी मनिषाको आलो’चना गरे ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितका भूगाग समेट्दै नेपालको नयाँ न’क्सा जा’री गर्ने नि’र्णय ग¥र्यो । पररा’ष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोही नि’र्णय जा’नकारी गराउँदै ट्वीट गरे ।
अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले त्यसलाई रिट्वीट गर्दै लेखिन– ‘हाम्रो सानो रा’ष्ट्रको गरिमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद । हामीले तीनै महान रा’ष्ट्रबीच शान्तिपू’र्ण र सम्मा’नजनक वा’र्ता होस् भन्ने चाहेका छौं ।’
राष्ट्रि’य प्रजा’तन्त्र पा’र्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीटरमा भारतीय सञ्चा’रमाध्यम एबीपी न्यूजले पीत पत्रकारिता गरेको आरो’प लगाएका छन् । त्यस्तै, करिष्मा मानन्धर, सञ्चिता लुइँटेल, शिल्पा पोखरेललगाएतका नेपाली अभिनेत्रीहरु पनि मनीषाको प’क्षमा उभिएका छन् ।
त्यसै क्र’ममा च’र्चित पत्रकार रबि लामिछानेलिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने ठोस प्र’माणसहित कार्य’क्रम प्र’सारण गरेका छन्। बिहीबार बिहान एउटा फेसबुक पोस्ट गर्दै उनले घो’षणा गरेका थिए ।
रबि लामिछानेले लेखेको स्टाटस हेर्नुहोस् !
भारतीय संचार माध्यमहरुले बिना आधार न नेपालका विरुद्ध भ्रम छर्न थालेपछि कनिकु भएपनि डिबेट संचालन गरेको छु।पहिलो पटक अङ्ग्रेजीमा डिबेट संचालन गर्दा कयौं कमज भएका छन्, क्षमा गर्नु होला।सहभागीहरु:प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्ल डा.राजन भट्टराई,परराष्ट्रविद तथा पुर्व र प्रधुम्न बिक्रम शाह,लेखक विश्लेषक टीका ढ अनि भारत बाट प्रोफेसर एस.डि. मुनी र भा सेनाका पुर्व जर्नेल तथा नेपाल भारत जानक अशोक मेहता।
कोरोना संक्रमित भएपछि डरले डेरा बाहिर बसेकी युवतीका घरबेटीले घरमै बोलाएर बनाइदिए आइसोलेसन
अविरल वर्षापछि दुर्गामन्दिर डुबानमा
कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षा हुन्छ कि हुदैन ? सरकारले बल्ल गर्यो यस्तो निर्णय
अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने ठाउँमा बसेर काम छैन भन्दै मनाङ्गेले दिए राजीनामा